Alahady fahaefatra Karemy – 30/03/2014 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Foto-kevitra: “Ny finoana an’I Kristy no fahazavana vaovao”.
Manantona hatrany ny fotoana fankalazana ny fetin’ny Paka. Isany fanamarihana ny “Paka” ny fandraisan’ireo zanaky ny Fiangonana ny “Sakramentan’ny Batemy” ho an’ireo zaza vory saina sy ny olon-dehibe. Izany indrindra no antony iresahana momba ny “Fahazavana” amin’ny Tenin’Andriamanitra androany sy ny “Rano” tamin’ny alahady teo. Ny fankalazana ny Fahazavana no fizarana lehibe voalohany amin’ny litorjia sasakalin’ny Paka.
Ambaran’ny foto-kevitra anio fa “Ny finoana an’I Kristy no fahazavana vaovao”.
Amin’ny fizarana voalohany amn’ny misasak’alin’ny paka ary dia ny Afo Vao no ankalazaina. Vonoina daholo ny jiro, fa misy afo arehitra kosa eny an-tokotany. Tsofin-drano avy eo ny afo dia arehitra avy amin’io ny JIRON’NY PAKA VAOVAO. Avy amin’io jiron’ny Paka narehitra io no andrehetana ny jiro rehetra izay efa nomanina mialoha. Rehefa izany dia miroso aty ampiangonana ny rehetra hankalaza ny fahazavana. Koa manomana antsika amin’izay fankalazana ny Paka izay ary ny Evanjely sy nyvakiteny rehetra androany.
Ny Evanjely androany dia mitantara ilay lehilahy teraka jamba (aveugle de naissance = jamba hatrany an-kibon-dreniny).
Tsy hisy olona mihitsy hahavita hitsabo ka hampahiratra olona teraka jamba. Araka ity Evanjely ity dia mangataka no asan’ilay jamba, tsy afaka ny hiasa na hitady vola amin’ny herin’ny tenany fa miandry ny fanampian’ny hafa (jamba aho eny jamba, nilaozan’hazavàna, hoy I Mahaleo, tonokira azontsika itarafana ny fahorian’ny olona jamba).
Teo am-pahitana ity jamba dia nametraka fanontaniana tamin’I Jesoa ny mpianatra: “IZA MOA NO NANOTA, IO LEHILAHY IO SA NY RAY AMAN-DRENINY, NO TERAKA JAMBA IZY?”. Araka ny kolon-tsaina jody manko, dia “Heverina fa misy fifandraisany ny fahotana sy ny loza mihatra eo amin’ny olombelona. Matoa misy voina manjo olona iray, dia noheverina tamin’izany andro izany fa vokatry ny fahotana izany (toy habokàna sns…)”
Manazava ny valin-tenin’I Jesoa: “Tsy izy no nanota, na ny rainy aman-dreniny, fa mba hisehoan’ny asan’Andriamanitra eo aminy no antony”.
Mety toe-tsaina mbola mangeja antsika ankehitriny io toe-tsaina jody io. Mitovy amin’ny ataontsika rehefa misy zavatra mitranga. Sarotra ho antsika ny miaiky fa manana andraikitra amin’io zavatra nitranga io koa isika, ny maha maika antsika dia ny mitady “Iza no nanao an’io, iza no tompon’andraikitra? Fa nahoana no toy izao? sns”
=> Izany hoe mitady olon-kafa homelohina (toetra mbola misy ao amintsika) = tsy vonona ny handray ny vokatry ny zavatra natao. Adinontsika anefa fa ny tsirairay dia SAMY TOMPON’ANDRAIKITRA!!!
Araka ity Evanjely ity dia marihina fa ilay jamba tsy nagataka tamin’I Jesoa ho sitranina. Fa I Jesoa no nandray ny fanapahan-kevitra avy hatrany.
Ny fihetsika nataon’I Jesoa tamin’izany: nandrora tamin’ny tany nanao feta ka nanosotra izany tamin’ny mason’ilay jamba. Mampatsiahy antsika ny fihetsik’I Jesoa tamin’Izy nanisy rora ny lelan’ilay lehilahy moana izany ka nahasitrana azy.
Ny rora dia manana kasinga manokana ahafahana manasitranana aretina sasantsasany (may, lanin’ny biby…)
Tsy mbola fandre kosa anefa ny hoe “rora entina hanasitranana mason’olona jamba”. Jesoa nanao feta tamin’ny rorany ary nanosotra izany ny mason’ilay jamba, ary naniraka azy hanasa ny masony any amin’ny farihin’I Silöe, izay midika hoe “iraka”. Rehefa nanao izany ilay jamba dia sitrana.
Nampametra-panontaniana karazan’olona maro ity fahasitranana mahagaga ity, ary niteraka fisarahan-kevitra ny olona.
1) Ireo mpiara-monina taminy: ireo dia nahalala azy hatramin’izay fa hoe jamba izy io ary nangataka no raharanany, fa ny sasany kosa milaza olo-mitovy aminy io, hany ka ilay jamba mihitsy no niteny hoe “izaho no izy”. Izy ireo no voalohany nametraka ny fanontaniana taminy: “Nanao ahoana no nahiratan’ny masonao?”. Novaliany araka izay nataon’I Jesoa ireo nanao hoe: “Ilay lehilahy atao hoe I Jesoa no nanao feta, nahosony ny masoko, dia nanao tamiko hoe: ‘mandehana manasa ny masonao any amin’ny farihin’I Siloe’, dia lasa aho nanasa, ka nahiratra”.
2) Ireo farisianina no nanontany azy manaraka. Ho azy ireo indray dia noho I Jesoa nanao izany fanasitranana izany tamin’ny andro sabata no olana, ka nilazany fa tsy avy amin’Anddriamanitra izany olona izany. Ilay jamba kosa afaka niteny am-pahalalahana fa I Jesoa dia “Mpaminany”.
3) Ireo ray aman-drenin’ilay jamba. Izy ireo indray no nampiantsoina ka nametrahana fanontaniana momba ny fahasitranan’ity teraka jamba: “Ity va no zanakareo izay lazainareo fa teraka jamba?”. Tsy te hiditra lalina izy ireo, ary tsy te ho tompon’andraikitra, koa naveriny any amin’ilay zanany ny famaliana ny fanontaniana: “izy no anontanio fa efa lehibe izy”. Rehefa nitohy niha mafy ny adihevitra dia nandroso hatrany ny fahalalan’ilay teraka jamba an’I Jesoa ka nilazany fa: avy amin’Andriamanitra I Jesoa, hoy izy: “raha tsy avy amin’Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy hahefa na inona na inona akory”
4) Ilay lehilahy jamba sitrana. I Jesoa mihitsy no nametraka ny fanontaniana tamin’ilay jamba teo aloha: “mino ny Zanak’Andriamanitra va ianao?”. Ity jamba no nahita ny fahazavana satria izy afaka nino an’I Jesoa ho Zanak’Andriamanitra, maneho izany ny fihetsika miankohoka nataony taminy sy ny valin-teniny: “Mino aho, Tompoko”.
Inona no hifandraisan’izay amin’ny fiainantsika?
Hitantsika fa mitovy rafitra tamin’ny Evanjely tamin’ny 23/03/2014 ity tantara ity.
=> Fa anio kosa dia resaka FAHAZAVANA no aroson’ny fiangonana amintsika raha momba RANO izany tamin’ny heriny.
=> Misy dingana tsikelikely mankany amin’ny finoana ao.
Entintsika handinihana ny dingan’ny finoana lalovantsika ny valintenin’ilay lehilahy jamba. Izy jamba, nefa izy tonga hatrany amin’ny finoana an’I Jesoa Kristy ho ilay Mesia.
Mitovy amin’ilay vehivay samaritanina nanilika an’I Jesoa (Jody), nefa tonga lasa misionera teo amin’ny tanàna, nitarika olona hihaino an’I Jesoa. Ary niaiky Azy ho Mesia.
Dingam-pinoan’ilay lehilahy jamba:
=> teo amin’ny valinteniny voalohany nilaza fa “ilay lehilahy atao hoe JESOA”
=> Faharoa, izy niaiky : “fantatro fa MPAMINANY Izy”
=> Avy eo izy niteny teo antrehan’ny farisianina fa : “ AVY AMIN’ANDRIAMANITRA IZY (i Jesoa)”
=> Nino izy fa I Jesoa dia “Zanak’Andriamanitra”.
Ny olona jamba izay tsy nahita fahazavana hatramin’izay no indro afaka mijoro amin’ny finoana an’I Jesoa eo anatrehan’ireo olona izay mihevitra ny tenany ho mahiratra. Izany no anton’ny foto-kevitra androany “Ny finoana an’I Kristy no fahazavana vaovao”.
Ny farisianina, noheverina fa mahay tsara ny Soratra Masina, noheverina fa olona afaka mampianatra ny Lalàna, ary manenjika ny olona izay tsy manaraka ny Lalàna, mihevitra ny tenany ho mahiratra, ka nahatonga an’I Jesoa niteny mafy azy ireo hoe: “noho ianareo ankehitriny manao hoe: Mahiratra izahay, dia tsy afaka ny helokareo.”
Inona no tian’I Jesoa ho tenenina amin’izany? Toy ny tavoahangy, rehefa feno rano hatrany amin’ny molony, dia tsy afaka hampidirana rano hafa intsony, toy izany koa ny olona mihevitra ny tenany ho tena efa mahay zavatra iray, tsy mila atoro intsony, ireny no olona tsy afaka ny hivoatra eo amin’ny finoana, koa izany no mahatonga azy tsy ho afaka heloka.
Ahitantsika toe-javatra mitovitovy amin’izany eo amin’ny fiainantsika andavanandro; manoloana ireo fampianarana mety ho entina eo amintsika: tsy manaiky ny hidirann’ny zavatra vaovao intsony (tahaka ireo farisianina).
=> Ny olona mihevitra ny tenany ho efa lavorary, dia tsy afaka intsony hiverina handray izany hoe fampianarana vaovao izany.
=> Ny olona mihevitra ny tenany ho efa masina, tsy afaka hiverina hanana fanetre-tena intsony ka hihevitra fa ny tenany anie ka mbola mpanota.
=> Sarotra ho an’ny olona tahaka izany anefa ny famonjena – ny farisianina nihevitra fa
olona efa mahay ny Soratra Masina sy ny Lalàna rehetra,
mahafantatra an’Andriamanitra ka tsy te ahafantatra intsony “Iza ity Jesoa ity”
Mety hisy fotoana ohatra an’izany eo amin’ny fiainantsika, eo amin’ny fiainam-pinoantsika è mihevitra ny tenantsika ho mahiratra sy mahay isika, nefa ny ao anatintsika ao dia tena jamba tanteraka.
Ny dingam-pinoana narahan’ity lehilahy jamba ity kosa no modely ho antsika.
Aiza ho aiza ny fianoantsika ankehitriny? Ity lehilahy jamba ity dia sahy nijoro hatramin’ny farany fa hoe :
“I Jesoa dia Zanak’Andriamanitra”. Fa ny olona izay nanodidina azy dia tsy nisy sahy nijoro amin’ny maha-izy azy, eny fa na dia ny ray aman-dreniny aza, noho ny tahotra ny fiaraha-monina. Tsy sahy nijoro ami’ny finoana.
Dia tahaka izany koa isika :MILA MIJORO AMIN’NY FINOANA ISIKA, ary io finoana anantsika io dia misy dingana tsikelikely arahana fandalinana. Miezaka isika mandalina ny finoanatsika mba HITOMBOANY satria rehefa tena mafy orina ny finoanantsika, na iza hanenjika antsika, na inona ety ho endri-panenjehana mivantana na an-kolaka, dia ho sahy mijoro isika amin’ny finoana hatramin’ny farany.
Modely ho antsika amin’ny finoana izany ity lehilahy teraka jamba ity: manaiky izy fa jamba ary nandray an’I Kristy Fahazavana. Izay no ezaka tsy maintsy ataontsika.
Ezaka amin’izao Karemy izao ny mba hampitombo hatrany ny finoantsika amin’ny alalan’ny vavaka.
Manentana hatrany ary mamerimberina foana, ny mba hanaovantsika ny Vavaky ny Fianakaviana, eny fa na dia ny Vavaka hariva ihany aza. Raha toaka tsy mbola nanao izany isika dia tsy mbola tara. Azontsika atao tsara io vavaka io mialoha ny hisakafoanana amin’ny hariva, rehefa tafavory eo ambony latabatra daholo ny mpianakavy, ATOMBOHY NY VAVAKA HARIVA!
Koa samia mangataka ny fahasoavan’Andriamanitra isika mba hahiratra tokoa, ary hiroso amin’ny fahalalàna an’I Jesoa Kristy.